5 Jehova wee gwa Mozis okwu ọzọ, sị:
2 “Nye ụmụ Izrel iwu ka ha si n’ebe unu mara ụlọikwuu kpọpụ onye ọ bụla na-arịa ekpenta+ na onye ọ bụla ihe na-agbapụta n’ahụ́+ na onye ọ bụla mkpụrụ obi nwụrụ anwụ mere ka ọ ghara ịdị ọcha.+
3 Ma ọ̀ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, unu ga-akpọpụ ya. Unu ga-akpọpụ ha ka ha gaa ná mpụga ebe unu mara ụlọikwuu+ ka ha ghara imerụ+ ụlọikwuu nke ndị mụ onwe m bi n’etiti ha.”+
4 Ụmụ Izrel wee mee otú ahụ, ha wee kpọga ha ná mpụga ebe ha mara ụlọikwuu. Dị nnọọ ka Jehova gwara Mozis, otú ahụ ka ụmụ Izrel mere.
5 Jehova gara n’ihu ịgwa Mozis, sị:
6 “Gwa ụmụ Izrel, sị, ‘Ma nwoke ma nwaanyị, ọ bụrụ na ha emee nke ọ bụla n’ime mmehie niile ụmụ mmadụ na-eme site n’imeso Jehova omume ekwesịghị ntụkwasị obi, mkpụrụ obi nke mere ya, ikpe mara ya.+
7 Ha ga-ekwupụta+ mmehie ha mere, ọ ga-akwụ ụgwọ maka ikpe mara ya, tụkwasịkwa ya otu ụzọ n’ụzọ ise,+ ọ ga-ewerekwa ya nye onye ahụ o mejọrọ.
8 Ma ọ bụrụ na onye ahụ o mejọrọ enweghị onye ikwu nke ọ ga-enye ihe ahụ ọ ga-akwụ maka ikpe mara ya, ihe ọ ga-ewetara Jehova maka ikpe mara ya ga-abụ nke onye nchụàjà, ma e wezụga ebule mkpuchi mmehie ọ ga-eji kpuchiere ya mmehie.+
9 “‘Onyinye+ ọ bụla nke si n’ihe nsọ+ niile nke ụmụ Izrel, bụ́ ndị ha ga-enye onye nchụàjà, ga-aghọ nke ya.+
10 Ihe nsọ nke onye ọ bụla ga-enye n’onyinye ga-abụ nke ya. Ihe ọ bụla onye ọ bụla nyere onye nchụàjà, ihe ahụ ga-aghọ nke onye nchụàjà ahụ.’”
12 “Gwa ụmụ Izrel okwu, sị ha, ‘Ọ bụrụ na nwunye nwoke ọ bụla ejehie wee meso ya omume ekwesịghị ntụkwasị obi,+
13 ya na nwoke ọzọ ewee dinaa, ọbara ọcha ewee pụta,+ e wee zochiere ya di ya,+ a chọpụtaghịkwa ya, nwaanyị ahụ n’onwe ya emerụwo onwe ya ma ọ dịghị onye gbagidere ya akaebe, e jideghịkwa ya;
14 mmụọ ekworo+ abanyekwa n’ime nwoke ahụ, o wee nyowe ikwesị ntụkwasị obi nwunye ya enyo, ya abụrụkwa na nwaanyị ahụ emerụwo onwe ya n’ezie, ma ọ bụkwanụ ya abụrụ na mmụọ ekworo abanyewo n’ime ya, o wee nyowe ikwesị ntụkwasị obi nwunye ya enyo, ma, n’ezie, nwaanyị ahụ emerụghị onwe ya;
15 nwoke ahụ ga-akpọrọ nwunye ya kpọtara onye nchụàjà,+ wetakwa onyinye, ya bụ, otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa ntụ ọka bali maka nwaanyị ahụ mgbe ọ na-akpọta ya. Ọ gaghị awụsa ya mmanụ ma ọ bụkwanụ tụkwasị ya frankinsens,+ n’ihi na ọ bụ àjà ọka ekworo, àjà ọka ncheta nke na-eme ka e cheta njehie.
16 “‘Onye nchụàjà ga-akpọta nwaanyị ahụ nso wee mee ka o guzo n’ihu Jehova.+
17 Onye nchụàjà ga-eji ite ụrọ kuru mmiri nsọ, onye nchụàjà ga-ekporokwa ájá n’ala ụlọikwuu ahụ, ọ ga-ekponye ya ná mmiri ahụ.
18 Onye nchụàjà ga-emekwa ka nwaanyị ahụ guzo n’ihu Jehova, ọ ga-atọsakwa ntutu isi nwaanyị ahụ ma dọkwasị àjà ọka ncheta ahụ n’ọbụ aka ya abụọ, ya bụ, àjà ọka ekworo ahụ,+ onye nchụàjà ga-ebukwa mmiri na-elu ilu nke na-eweta ọbụbụ ọnụ n’aka.+
19 “‘Onye nchụàjà ga-eme ka ọ ṅụọ iyi, ọ ga-asịkwa nwaanyị ahụ: “Ọ bụrụ na o nweghị nwoke gị na ya dinara, ọ bụrụkwa na kemgbe ị nọ n’okpuru di gị,+ i jehiebeghị wee mee ihe ọ bụla na-adịghị ọcha, ka mmiri a na-elu ilu nke na-eweta ọbụbụ ọnụ ghara ime gị ihe ọ bụla.
20 Ma ọ bụrụ na gị onwe gị ejehiewo kemgbe ị nọ n’okpuru di gị,+ ọ bụrụkwa na i merụwo onwe gị, o wee bụrụ na gị na nwoke ọzọ enwewo mmekọahụ,*+ ma e wezụga di gị,—”
21 Onye nchụàjà ga-eme ka nwaanyị ahụ ṅụọ iyi nke pụrụ iwetara ya ọbụbụ ọnụ,+ onye nchụàjà ga-asịkwa nwaanyị ahụ: “Ka Jehova mee ka ị bụrụ onye a bụrụ ọnụ na onye iyi ọ ṅụrụ ga-ere n’isi ya n’etiti ndị gị, site na Jehova ime ka apata ụkwụ+ gị kpọnwụọ, meekwa ka afọ gị zaa.
22 Mmiri a nke na-eweta ọbụbụ ọnụ ga-abanyekwa n’eriri afọ gị iji mee ka afọ gị zaa, meekwa ka apata ụkwụ gị kpọnwụọ.” Nwaanyị ahụ ga-asịkwa: “Amen! Amen!”
23 “‘Onye nchụàjà ga-ede ọbụbụ ọnụ ndị a n’akwụkwọ+ ma saba+ ha n’ime mmiri ahụ na-elu ilu.
24 Ọ ga-eme ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ na-elu ilu nke na-eweta ọbụbụ ọnụ,+ mmiri ahụ na-eweta ọbụbụ ọnụ ga-abanye n’afọ ya dị ka ihe na-elu ilu.
25 Onye nchụàjà ga-eburu àjà ọka+ ekworo ahụ n’aka nwaanyị ahụ ma fegharịa ya n’ihu Jehova, ọ ga-ewetakwa ya nso n’ebe ịchụàjà ahụ.
26 Onye nchụàjà ga-ekporokwa ụfọdụ n’ime àjà ọka ahụ ka ọ bụrụ ihe ncheta+ ya ma suree ya n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà, e mesịa, ọ ga-eme ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ.
27 Mgbe o mesịrị ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ, ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na o merụrụ onwe ya wee meso di+ ya omume ekwesịghị ntụkwasị obi, mmiri ahụ nke na-eweta ọbụbụ ọnụ ga-abanye n’afọ ya dị ka ihe na-elu ilu, afọ ya ga-azakwa, apata ụkwụ ya ga-akpọnwụkwa, nwaanyị ahụ ga-aghọkwa onye a bụrụ ọnụ n’etiti ndị ya.+
28 Otú ọ dị, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ emerụghị onwe ya, o wee bụrụ na ọ dị ọcha, ọ gaghị anata ntaramahụhụ+ dị otú ahụ; ọbara ọcha ga-eme ka ọ tụrụ ime.
29 “‘Ọ bụ nke a bụ iwu banyere ekworo,+ ma ọ bụrụ na nwaanyị ejehie+ mgbe ọ ka nọ n’okpuru di ya,+ o wee merụọ onwe ya,
30 ma ọ bụ, ọ bụrụ na mmụọ ekworo banyere n’ime nwoke, o wee nyowe nwunye ya enyo na o kwesịghị ntụkwasị obi; ọ ga-eme ka nwunye ya guzo n’ihu Jehova, onye nchụàjà ga-emezu iwu a dum n’ebe nwaanyị ahụ nọ.
31 Nwoke ahụ ga-abụ onye ikpe njehie na-amaghị, ma nwunye ya ga-aza ajụjụ maka njehie ya.’”
^ Ọg 5:20*
Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “nwoke ọzọ nyụnyere gị ọbara ọcha n’ahụ́.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D4%26Chapter%3D5%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl